Fotoana famakiana: 3 minitra Ao anatin'ny sehatry ny haitao marketing dia nisy fitomboana lehibe niaraka tamin'ny Software ho serivisy sy ny fahafaha-mividy izay ilainao avy ao anaty boaty. Rehefa nandeha ny fotoana dia resin'i SaaS ny vidin'ny fananganana trano ary orinasa SaaS maro no niainga rehefa nandresy tamin'ny ady hevitra momba ny teti-bola izy ireo. Taona maro taty aoriana, ary ny mpivarotra dia mahita ny tenany amin'ny làlana hafa. Ny tena izy dia mitohy mihena ny vidiny ny fananganana. Misy antony maromaro mahatonga ny